Eyona Powder iluhlaza yeTadalafil (171596-29-5) Abavelisi kunye nabaXhobisi -Fektri
Oktobha 20, 2018
I-Raw Tadalafil powder phantsi kwegama le-Cialis isetyenziselwa ukuphatha ukungasebenzi (ukungabi namandla) kunye neempawu ze-prostatic benign ...
Igama lemveliso Tadalafil powder
Igama leKhemikhali (6R,12aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
uhlobo Numama Cialis, Adcirca
Iqela leziyobisi I-PAH, i-PDE-5 Inhibitors; I-Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitors
Inani leCAS 171596-29-5
I molecular Fi-ormula C22H19N3O4
IMasaisotopic Mass 389.138 g / mol
Ukuxuba Point 298-300 ° C
Fukuhlaziywa kwakhona Point 2 ℃
I-Biological Half-Life iiyure 17.5
Sukufaneleka I-Soluble kwi-DMSO (78 mg / ml kwi-25 ° C), i-methanol, amanzi (<1 mg / ml kwi-25 ° C), i-dichloromethane, kunye ne-ethanol (<1 mg / ml kwi-25 ° C)
Sisibetho Tukushisa Gcina kubushushu begumbi phakathi kwe-59 ° F kunye ne-86 ° F (15 ° C kunye ne-30 ° C). Sukuyigcina le yeyeza kwindawo efumileyo okanye efumileyo.
Tadalafil Aukuguquka Amaphilisi amadaka e-Tadalafil amancinci, i-candy yezocansi, ikhofi yesondo, njl.
I-Tadalafil, (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6, 3,4] pyrido [1,4-b] indole-5-dione (Cialis), luhlobo lwe-PDE5 inhibitor kunye nesiyobisi esilawulwa ngomlomo. Sisiphumo se-b-carboline kwaye siyilwe ngokwahlukileyo kwi-vardenafil (i-Levitraw) kunye ne-sildenafil (i-Viagraw), zombini ezi ziyi-PDE171596 inhibitors esekwe kulwakhiwo olusisiseko lwe-pyrimidine. I-Tadalafil powder (i-CAS 29-5-2003) yonyusa ukuhamba kwegazi kwi-corpus cavernosum ngokuphumla kwimithambo yegazi, kwaye oku kwenza ukuba umntu afezekise ulwakhiwo. I-Tadalafil powder yavunywa yi-United States (i-US) yokuTya kunye noLawulo lweeDrug (FDA) kwi-XNUMX kunyango lokungasebenzi kakuhle (i-ED), kwaye ithengiswa kwihlabathi liphela phantsi kwegama lophawu lweCialis. Isetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo lwegazi lwe-pulmonary arterial hypertension kunye ne-benign prostatic hyperplasia, imeko apho i-prostate gland iyanda, ibangela iingxaki ngokuchama.
I-Tadalafil eyahlula i-pharmacologic yecandelo layo kukuphila ixesha elide (iiyure eziyi-17.5) xa kuthelekiswa neViagra kunye neLevitra (iiyure ezi-4-5). Esi siqingatha sobomi sikhokelela kubude bexesha lesenzo kwaye, ngokuyinxenye, linoxanduva lesidlaliso seCialis "sepilisi yempelaveki." Esi siqingatha sobomi ikwasisiseko sophando lwangoku lokusetyenziswa kwe-tadalafil kwi-pulmonary arterial hypertension njengonyango lwemihla ngemihla.
Ukulungiswa kwe-Penile ngexesha lokuvuselela ngokwesondo kuphunyezwe ngokuphumla kwemithambo ye-penile kunye ne-corpus cavernosal e-smooth muscles, ekhokelela ekunyuseni kwegazi kwi-organ. Olu luleko luvumela ukunyuka kwegazi kwiimitha ze-penile, ngelixa legazi lizalisa amagumbi amabini ngaphakathi kwipenisi ebizwa ngokuba yi-corpora cavernosa. Njengoko amagumbi agcwalisa igazi, ipenisi ikhula iqina. Ukulungiswa kuphelela xa isivumelwano somsila kunye negazi eliqokelelwayo liyakwazi ukuphuma ngeemvini ze-penile.
Le mpendulo iyalawulwa ngokukhutshwa kwe-nitric oxide (NO) kwiziphelo ze-nerve kunye neeseli ze-endothelial, ezikhuthaza ukudityaniswa kwe-cGMP kwiiseli zemisipha egudileyo kwaye emva koko ilawule ukuxubana kunye nokuncipha kwemithambo yegazi ephethe igazi ukuya kwilungu lobudoda. I-cyclic GMP ibangela ukuphumla kwezihlunu ezigudileyo kunye nokunyusa ukuhamba kwegazi kwi-corpus cavernosum, kwaye ihlazisiwe yi-cGMP ethile ye-phosphodiesterase yohlobo lwe-5 (PDE5) kwi-corpus cavernosum ejikeleze ipeni. I-Tadalafil inqanda i-PDE5 kwaye ke ngokwandisa ukonyusa inani le-cGMP ekhoyo. I-Tadalafil iyeka i-PDE5 ekutshabalaliseni i-cGMP kwaye inyuse i-cGMP ekhoyo yokufezekisa umsebenzi kwaye ibangele ulwakhiwo luhlale ixesha elide.
Nangona kunjalo, njengesiqingatha sobomi beTadalafil bufutshane, isiphumo sayo siyaphela kwithuba leentsuku ezi-2 zisenza ukuba iP PDE5 ibuye kwaye impilo yakho yezesondo-ibe mandundu. Kuya kufuneka uthathe ixesha elide ukufezekisa iziphumo ozifunayo, ezinje nge-low-power Cialis 4-5 yeentsuku zeentsuku ze-4-5.
I-Erectile i-dysfunction (ED)
I-Norepinephrine ithatha i-blocker
I-o-opiod receptor agonist
Ukuphakanyiswa kweTadalafil powder Isilinganisi
I-Cialis iza namacwecwe atyheli, agutyungelwe ifilimu kunye nee-almond kwi-5, 10 kunye ne-20 milligram (mg) yedosi. Umthamo wokuqala ocetyiswayo we-Cialis powder ukuze usetyenziswe njengoko kufuneka kwizigulana ezininzi yi-10 mg, ethathwe ngaphambi kokulindelwa kwesondo.
I-dose yokuqala i-10 milligrams (mg) ubuncinane imizuzu eyi-30 ngaphambi komsebenzi wesondo. I dose inokunyuka ukuya kwi-20 mg okanye iyancipha kwi-5 mg, ngokusekelwe kumsebenzi ngamnye kunye nokunyamezela. Kodwa, ubuninzi be-20 mg njengomlinganiselo omnye. Umlinganiselo ophezulu ophakanyisiweyo we-dosing frequency unye ngosuku ngosuku ezininzi kwizigulane. akufanele ifune ukuthatha enye idosi kwiiyure ze-24. Izigulane ezilindele ukulalana ngesondo ubuncinane kabini ngeveki zingathatha umthamo wemihla ye-5 mg, kwaye oku kunokuncitshiswa ku-2.5 mg rhoqo ngosuku, kuxhomekeke kwisabelo ngasinye.
I-Cialis powder yokusetyenziswa njengoko kufuneka ibonakaliswe ukuphucula umsebenzi ngokuthelekiswa ne-placebo ukuya kwii-36 iiyure ezilandela i-dosing. Ke ngoko, xa ucebisa izigulana malunga nokusetyenziswa ngokufanelekileyo kweCialis powder, oku kufanele kuthathelwe ingqalelo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukwakhiwa akusayi kwenzeka ngokuthatha ipilisi. Kwaye musa ukuthatha i-Cialis yokungasebenzi kakuhle xa uthatha i-Adcirca ye-pulmonary arterial hypertension. Ngaphandle, i-Tadalafil yokungasebenzi kakuhle isetyenziselwa kuphela ngabantu abadala abaneminyaka eyi-18 nangaphezulu.
Powder I-Tadalafil powder inokunceda ukuphumla umsipha kwiprostate nakwisinyi. Oku kunokunceda ukuphucula iimpawu zakho ze-BPH.
Ukuphucula iimpawu ze-ED, i-tadalafil powder inceda ukwandisa ukuhamba kwegazi kwi-penis. Oku kunokukunceda ufumane kwaye ugcine ulwakhiwo. Ukufumana i-tadalafil powder ukukunceda ukuba ube nolwakhiwo, kuya kufuneka uvuswe ngokwesondo.
Kwi-PAH, i-tadalafil powder isebenza ukuphucula amandla akho omthambo ngokuphumla kwemithambo yegazi kwimiphunga yakho. Oku kwandisa ukuhamba kwegazi.
Kanye kunye nemiphumo efunekayo, iyeza lingazenza ezinye iziphumo ezingafunekiyo. Nangona kungekhona zonke iziphumo zempembelelo ezinokuthi zenzeke, ukuba zenzeke zingadinga ukunikwa ngonyango. Nceda ukhangele iziphumo ezilandelayo zecala le-tadalafil:
▪ uphazamise isisu
▪ imisipha yomzimba
▪ ukutshiza (isikhumba ebomvu)
▪ impumlo okanye iipumlo
Kuqhelekileyo kodwa iziphumo ezibi kakhulu
Ulungiso olude olunokubangela umonakalo kwi-penis, iingxaki zembono kunye nokulahlekelwa kwindlebe.
Abantu abaneemeko zilandelayo akufanele bathathe i-Cialis powder ngaphandle kokuba ugqirha uyavuma:
▲Iingxaki zengqondo zentliziyo, iingxaki ze-angina, okanye nayiphi na isifo sesifo
▲Uxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye oluphantsi
▲Ukungaphumeleli kwentliziyo yesibhedlele okanye ukubetha phakathi kweenyanga ezidlulileyo ze-6, okanye i-myocardial infarction kwiinyanga ezidlulileyo ze-3
▲I-sickle cell anemia, i-myeloma, i-hemophilia, i-leukemia, okanye enye ingxaki yegazi
▲Isifo okanye isifo sesifo
▲Ukukhubazeka kolwakhiwo lobudoda, njengesifo sikaPeyronie
▲Nayiphina imeko yempilo apho bacebiswe ukuba bangalalani ngesondo
Xa usebenzisa i-tadalafil, kunokukho nezinye iziyobisi ezinokuchaphazela izidakamizwa, ezinokubangela kwimiphumo emibi. Ukusebenzisana kweziyobisi kunokutshintsha indlela amayeza akho asebenza ngayo okanye ukwandisa umngcipheko weemiphumo ezibi kakhulu.
I-Tadalafil inesiphumo esincinci se-synergistic ekunciphiseni i-nitrate ekunciphiseni kwegazi. I-Tadalafil inokubangela ukuphosa okukhulu kwi-blood pressure yakho xa kusetyenziswa i-nitrate, nto leyo ingakhokelela kwisisu, ukuphelelwa amandla, kunye nokuhlaselwa kwintliziyo. Ungasebenzisi i-tadalafil kunye naluphi na olu lulandelayo: ezinye iziyobisi ezisetyenziselwa ukuphatha intlungu yesifuba / i-angina (iititrate ezifana ne-nitroglycerin, isosorbide), iziyobisi zokuzonwabisa ezibizwa ngokuthi "i-poppers" eziqukethe i-amyl okanye i-nitrite.
Ukuba nawe uthatha i-alpha blocker yonyango (njenge doxazosin, tamsulosin) ukunyanga iprotate ye-prostate / i-BPH okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu, uxinzelelo lwegazi lungahle lube luphantsi kwaye lunokubangela ukuthotywa kwesisu okanye ukuphelelwa amandla. Ugqirha wakho angaqala unyango nge-dose ephantsi ye-tadalafil okanye utshintshe iyeza lakho le-alpha blocker ngamayeza ukunciphisa umngcipheko wexinzelelo lwegazi oluphantsi.
Kwizifundo zeklinikhi, amanani abalulekileyo okuphendula axelwa ukuya kwi-36 h emva kokungenisa iziyobisi. I-Tadalafil inyanzelwe ubukhulu becala kwisibindi yi-CYP3A4 kwizinto ezingasebenziyo ngokuchasene ne-PDE5 kwaye ikhutshelwe ikakhulu njengeemetabolites kulwelo kunye nomchamo. I-pharmacokinetics ye-tadalafil ayichaphazeleka zizinto ezinje ngokutya kunye notywala, ubudala, ubukho besifo seswekile, kunye nokungabikho ngokwaneleyo kwe-hepatic hepatic. Ezona ziganeko zixhaphakileyo ezinxulumene neziyobisi ziqaqanjelwa yintloko, iintlungu zangasemva, idyspepsia, kunye neMyggia. Kwi-doses ye-10 kunye ne-20 mg, i-Tadalafil ayinalo umphumo obonakalayo koxinzelelo lwegazi kunye nesantya sentliziyo kwaye ayikhokelela kwizimo zokonyuka kwe-myocardial infarction. Iingxelo ezinqabileyo zee-eension ezide ezingaphezulu kwe-4 h kunye ne-priapism ziye zaphawulwa ngokusetyenziswa kwe-tadalafil. Ukugxila, ukuba akuphathwanga kakuhle, kunokubangela ukonakala kwesithako. Izigulana ezine-erection engapheliyo kune-4 h ziyacetyiswa ukuba zifune unyango olungxamisekileyo. Kwizigulana ezinesifo seswekile, ukuphuculwa kokusebenza kwe-tadalafil kukukhetha uhlobo lweswekile kunye nohlobo lwesifo seswekile.
Amanye amayeza anokuchaphazela ukususwa kwe-tadalafil emzimbeni wakho, onokuchaphazela indlela i-tadalafil isebenza ngayo. Imizekelo ibandakanya i-azole antitifungals (njenge-itraconazole, i-ketoconazole), i-macrolide antibiotics (njenge-clarithromycin, i-erythromycin), i-HIV protease inhibitors (njenge-fosamprenavir, i-ritonavir), i-virus ye-hepatitis C inhibitors (njenge-boceprevir, telaprevir), i-rifampin, phakathi kwabanye .
Musa ukuthatha eli liyeza ngayo nayiphi na enye imveliso equkethe i-tadalafil okanye amanye amayeza afanayo asetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle (i-dildfunction-ED okanye i-pulmonary hypertension (njenge sildenafil, vardenafil).
Ngokuphathelele ukusebenzisana kweTadalafil kunye nezinye iziyobisi zinezinto ezininzi, ukuba ufuna ukusebenzisa izidakamizwa kunye ne-tadalafil powder (CAS 171596-29-5), khumbula ukuqala ukudibana nogqirha wakho kwaye uyakukunika isiluleko esinobuchule kunye nolunokwethenjelwa.
I-Tadalafil powder, i-sildenafil powder, kunye ne-vardenafil powder yonke isebenza ngokuthintela i-enzyme ye-PDE5, kodwa la machiza athintela ii-enzymes ze-PDE 6, 1, kunye ne-11 ngokwamaqondo ahlukeneyo. Umzekelo, iSildenafil kunye ne-vardenafil inhibit PDE6, i-enzyme efumaneka kwiliso, ngaphezulu kwe-tadalafil. Abanye abasebenzisi be-sildenafil babona i-bluish tinge kwaye banemvakalelo ephezulu yokukhanya ngenxa ye-PDE6 inhibition. Ngaphandle koko, iSildenafil kunye ne-vardenafil ikwathintela i-PDE1 ngaphezulu kwe-tadalafil. I-PDE1 ifumaneka kwingqondo, entliziyweni, nakwimisipha egudileyo yemisipha. Kucingelwa ukuba ukuthintelwa kwe-PDE1 yi-sildenafil kunye ne-vardenafil kukhokelela kwi-vasodilation, flushing, kunye ne-tachycardia.
Xa kuthelekiswa nokusebenza kwi PDE6 kunye ne-PDE1, i-tadalafil yenza ngokugqithiseleyo kwi-PDE11. I-PDE11 ibonakaliswe kwisisu se-squelet, i-prostate, isibindi, iinjongo, i-pituitary gland, kunye nee-testes. Nangona kunjalo, iziphumo emzimbeni we-PDE11 azivimbelayo.